Sweden yakakurudzira kuhaya mapurisa eNorway - TELES RELAY
HOME » kambani Sweden yakakurudzira kuhaya mapurisa eNorway
Sangano revapurisa reSweden rakadana hurumende kuti inyore mapurisa kubva kuNorway yekuvakidzana kuti varwe nekushaikwa kwevashandi.
Maererano nehurumende, vazhinji vanopfuura 250 mapurisa muNorway havagoni kuwana basa kunyange zvazvo vakanyatsokwanisa.
Akazvipira kutora kutendeuka ndokutanga kushanda muSweden.
Mapurisa eSweden akaudza BBC kuti haina kuronga kubhadhara mapurisa akadzidziswa munyika.
Mapurisa eSweden anotarisira kukanda mapurisa matsva e7 000 ne2024.
Zvisinei, maererano naAna Dennis, vamiriri vemutungamiri weSweden Police Union, nzvimbo dzakawanda dzinoramba dzisingabatsiri nokuti mapurisa eSweden ane chikamu chikuru chekukundikana.
Anofunga kuti mari shoma inopiwa inoita kuti mapurisa arege kukwezva avo vakanakisisa.
Zvinotora makore maviri nehafu ekudzidzira kuva mupurisa muSweden. Vadzidzi vanofanirwa kupfuura miedzo yepanyama, yepfungwa uye yepamutemo, vave neine reisense yekufambisa, vanogona kushambira uye vave nehurumende yeSweden.
Panguva iyi, mapurisa ari kushanda ari kunzwa vari pasi pasi, akadaro Madhi Dennis. Izvi zvinowedzera nekuwanda kwemahofisi anosiya simba - kubva ku612 mu 2011 kusvika ku888 gore rapera.
"Zvinotora makore akawanda kuti nhamba idzi dzienzane," akadaro Dennis pa BBC. . Akatsanangura kuti kubatana kwake kwakange kuchida kuunganidza muNorway nokuti "tinoda kuva chikamu chekugadzirisa pane kutaurira munhu wese kuti zvinotyisa sei".
Norway: chii chaunoda kuziva
Kusiyana nevavakidzani vavo vokumabvazuva, Norway ikozvino ine mapurisa akawanda akadzidziswa asingagoni kuwana mabasa nekuda kwekushaya mari yehurumende.
Mapurisa enyika mbiri idzi anobatanidza nyaya dzakachengeteka.
Mumashoko, mapurisa eSweden akaudza BBC kuti "zvakanaka kuti pfungwa itsva dzibude" ". Zvisinei, mutemo waida kuti mapurisa ose ave vagari vemuSweden - kuti vave nekodzero yekuzviti vagari venyika - vanhu vakaberekerwa muSweden kana kuti vakagara munyika kwenguva inenge makore mashanu.
Hapana kubva kumapurisa eNorway aiva nesimba. pakarepo inowanikwa kuti igone kupindura.
Mitauro yeNorway uye yeSweden yakabva kuNorse asi apo matanho avo akafanana, mazwi mazhinji akasiyana maererano neBabbel mutauro wekudzidza webhusaiti.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.bbc.com/news/world-europe-48314442
Facebook inopomesa Candace Owens kwenguva pfupi nokuda kwemashoko ake pa "Kuremekedzwa"
Kanzura: dhipatimendi yemudzidzisi wezemitambo kuti atsigire vanorwara
Marokero: Morocco: mujeri nokuda kwekunyora mapurisa
DHUTERU YOKUTAURA Taura: Man United uye Real Madrid vanorwira Felix
Joko anowedzerazve kusarudzwa muIndonesia, kukunda mukuru wekare wekusagadzikana-New York Times
Nhau dzakaipa kune vashandisi veHuawei: Google inosimudzira kubatanidzwa neChina brand ...